Homeसमाचारकुलमान घिसिङको पक्षमा काठमाण्डौमा विशाल प्रदर्शन (भिडियो हेर्नुहोस)
September 16, 2020 admin समाचार 11974
कुलमान घिसि ङलाई नेपाल विद्युत प्राधिक’रणको कार्यकारी निर्देशकमा फेरि नियुक्त गर्न माग गर्दै काठमाडौंको जोर’पाटी र बालाजुमा प्रदर्शन भएको छ ।
बालाजु माछा’पोखरीमा स्वतन्त्र ना’गरिक समूहले शान्तिपुर्ण प्रदर्शन गरेको हो भने जोर’पाटीमा स्थानीय युवाहरुले प्रदर्शन गरेका हुन् । विभिन्न प्ले-कार्ड समेत बोकेकाहरुले सर’कारले कुलमान’माथि न्याय गर्न नसकेको भन्दै चर्को नाराबजी पनि गरेका थिए ।
राष्ट्रिय झण्डाव’सहित उपस्थित युवाहरुको समूहले कुलमा’नको पुनः नियुक्तिमा ढिलाइ भएको भन्दै सरकारविरुद्ध नाराcबाजी गरेका हुन् । उनीहरुले कुलमान’लाई फेरि प्राधिक’रणमा जिम्मेवारी दिने गरी निर्णय गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
घिसिङको चार वर्षको कार्य’काल आइतबा’र पुरा भएको थियो । प्राधिकर:णका कर्मचारीले मंगलबार उनको औपचारिक बिदाइ पनि गरेको छ । प्रधानमन्त्री नै कुलमा’नलाई दोहोर्‍या’उन इच्छुक छैनन् । जनस्तरबाट भने कुलमानलाई फेरि प्राधिकरणमा नियु’क्ति गर्न सरकारमाथि दबाव छ । – अनलाईन खबर
यहाँ थिचेर भिडियो हेर्नुहोस ।
भोलि भदौ ३१ गते बुधबारको राशिफल हेर्नुहोस्
सविता भण्डारी प्र’करण, सविताले यती सम्म सहेकी रहेछिन् खुल्यो वास्तविकता ! (भिडियो)
June 9, 2021 admin समाचार 3912
चितवनकी सविता भण्डारीको मृ’त्यु प्रकरण उनीप्रति न्याय माग्दै सामाजिक सञ्जा’लमा ह्या स ट्या ग नै चलि’रहेको छ, ज स्टिस फर सविता भण्डारी दे ह त्या’ ग कि ह ‘त्या? सोसल मिडियामा सविताको मृ’त्युको बहसको विषय
October 10, 2020 admin समाचार 9355
January 22, 2021 admin समाचार 5023